Oromiyaa – Page 4 – Welcome to bilisummaa
Oromiyaan ammayyuu qabaa jala jirti. Oromoon hardhallee lafa saanii, qabeenya sanii, mirga nam tokkee, mirga ummataa fi birmadummaa saanii akka sarbamanitt jiru. Aadaan, dudhaan, afaannii …
Duulli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan geggeeyfamaati jira. Weerarri Wayyaaneen karoorsite kuni akeekni saa Oromoo buqqaasanii onafii qubsuma malee …
Balaan duguuginsa shanyii wayyaaneen oromoota baha oromiyaa ona Anniyyaa Mayyuu Mulluqqee fii Qumbii irrati raawachaa jirtu itti fufee jira. Linkii armaan gadii kana dhageefadhaa. Gara …